Online Dream လွန်ခဲ့တဲ့ ၈ နှစ်တိတိက ပျက်သွားသော ကျွန်ုပ်၏အိပ်မက်
ကျွန်တော် ရွေ့လျားဆေးခန်းအိပ်မက် မက်ခဲ့ဘူးတယ်။ Yamuna Online Mobile Clinic လို့ နာမည်ပေးထားခဲ့တယ်။ မမွေးသေခင် ကလေးနာမည် ရွေးထားသလိုပေါ့။ နယူးဒေလီမှာ အခမဲ့ယမုန်နာဆေးခန်းလေး ၁၂ နှစ်တိတိဖွင့်ခဲ့တယ်။ မွေးလူနာလက်ခံတာ ၈ နှစ်။ အွန်လိုင်းကနေ ကျန်းမာရေးနဲ့ ဆေးပညာစာတွေ ရေးနေတာ ၇ နှစ်။ မေးသမျှ အွန်လိုင်းကနေ ဖြေပေးနေတာ ၅ နှစ်ကြာပြီ။ နောက်တဆင့် တက်ချင်လာတယ်။ အိပ်မက်ထဲမှာ မြန်မာပြည်တလွှား အရှေ့-အနောက်-တောင်-မြောက် မြို့မရွေး-ရွာမရွေး ရွေ့လျားပြီး၊ ဆေးကုပေးနေတယ်။ ကျန်းမာရေး-ဆေးပညာ သင်တန်းလဲပေးတယ်၊ မေးတာတွေလဲဖြေနေတယ်။ လောဘကြီးတယ်။ ကားကြီးကြီးလိုမယ်။ အသေအချာတပ်ဆင်၊ ပြင်ဆင်ထားတဲ့ ကားခေါင်မိုးမှာ ဆိုလာပြားကြီးရှိမယ်။ ဆေးသိုလှောင်စရာ ရေခဲသေတ္တာကြီးကြီးပါမယ်။ မီးဖို၊ ရေအိမ်သာစတာတွေ။ ဆေးတွေကလဲ Generic ဆေးတွေ ဖြစ်စေရမယ်။ ဘယ်ကနေ ဘယ်လိုဝယ်မလဲ စဉ်းစားနေတယ်။ စောင့်ထိန်းလိုက်နာစရာ စည်းကမ်းကျင့်ဝတ်တွေ။ ငွေရေးကြေးရေးပွင့်လင်းမှု လိုမယ်။ စာရင်းကိုင်၊ စာရင်းစစ်တွေ အကူအညီတောင်းရမယ်။ လမ်းစည်းကမ်း၊ ယာဉ်စည်းကမ်းလိုမယ်။ မှတ်ပုံတင်တာ၊ ခွင့်ပြုချက် ယူတာတွေ လိုမယ်။ ကိုယ့်မှာတော့ ဆမ အသိမ်းခံထားရတယ်။ ဓါတ်ခွဲခန်းသေးသေးပါ ကားကြ
• ဆရာ ဆရာသင်တဲ့ဓါတုဗေဒထဲက ရုပ်ပြောင်းလဲခြင်းတော့ မြင်နေရပြီဆရာ၊ ဓါတ်ပြောင်းလဲခြင်းက အတော် စောင့်ရအုံးမှာဆရာ၊ • ဆရာ ဆရာ့ရူပဗေဒထဲက အလင်းဆိုတာ မှုံဝါးဝါးတော့ မြင်လာရပြီဆရာ၊ သံလိုက်စက်ကွင်းက မလွတ်သေးဘူးဆရာ၊ • ဆရာမ ဆရာမသင်ပေးတဲ့သမိုင်းထဲက မင်းဆိုးမင်းညစ်တွေကို ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ရပါပြီဆရာမ၊ • ဆရာ ဆရာ့သင်္ချာက အသုံးကျပြီး၊ လွယ်လိုက်တာဗျာ၊ အနိမ့်ဆုံးဂဏန်းဟာ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကလို့ မှတ်သားရတယ်ဆရာ၊ • ဆရာ ဆရာသင်ပေးတဲ့ ကမ္ဘာ့ပထဝီထဲက နို်င်ငံတွေအစုံကိုရောက်ပြီး၊ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်က အောက်ကျတာတွေ သွားပြောခဲ့တယ်ဆရာ၊ • ဆရာမ ဆရာမသင်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ ကျွန်တော်နဲနဲတတ်တာ အသုံးတည့်တယ်ဆရာမ၊ ဗမာစကား မတတ်သူတွေကို ကျွန်တော်တို့ဆီကလူတွေ ဆင်းရဲတဲ့အကြောင်း စကားလုံးတွေပြောင်းပြောင်းပြီး ကျွန်တော် ပြောတတ်တယ်ဆရာမ၊ • ဆရာ ဆရာ့မြန်မာစာ ကျွန်တော်အသုံးချနေတယ်ဆရာ၊ ဦးပေါ်ဦးလို ဘုရင်ကိုလဲ အရူးလုပ်တတ်တယ်ဆရာ၊ အနန္တသူရိယ အမတ်ကြီးလိုလဲ သံဝေဂတွေရပါတယ်ဆရာ၊ • ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးခင်ဗျား ကျောင်းစည်းကမ်းတွေက ကျွန်တော့်ဘဝမှာ တကယ်အသုံးကျပါတယ်ဗျာ၊ တာဝန်ဆိုတာ ယူတတ်သလို၊ ကြိုးစားရမှာဆိုတာလဲသိလို့၊ အခုထိ ကျွန်တော်ကြိုးစားနေပါ
နေ့တိုင်းလိုလိုမှာ မြို့ဆိုင်းဘုတ်တွေပေါ်လာ ရွာဆိုင်းဘုတ်တွေပေါ်လာ ဒါ သေကျေပျက်စီးတဲ့ မြို့ရွာ သို့မဟုတ် အသေခံတဲ့ မြို့ရွာ။ ဓါတ်ပုံတင်ပြီး အားပေးသူတွေ စာရေးပြီး ဂုဏ်တင်သူတွေ သူတပါးကို နှစ်ရာမရောက် ချစ်ရာသာ ရောက်ကြပါစေသတည်း။ ။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၃၁-၁၂-၂၀၂၁ ည ၁၁ နာရီ ၅၉ မိနစ်။
တနှစ်ကုန်တိုင်း ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကို ပြန်ပြီး သုံးသပ်ကြတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သုံးသပ်ကြတယ်။ တိုင်းပြည်ကို သုံးသပ်တယ်။ နှစ်ဆန်းရက်ပြီးတာနဲ့ လွတ်လပ်ရေး နှစ်ပတ်လည်နေ့။ လွတ်လပ်ရေးက ကျွန်တော့်ထက် ၈ လသာကြီးတယ်။ ဖဆပလ ခေတ်ကို အစအဆုံးမီတယ်။ ငယ်သေးတော့ သိတာ နည်းတယ်။ မှတ်မိတာလည်း နည်းတယ်။ မေ့မရတာတွေ မမေ့ပါ။ ဇာတိမင်းရွာမှာ သူပုန်တွေ ဓါးပြတွေပေါတယ်။ ပြည်တော်သာကျောင်းလေးတကျောင်းရတယ်။ ရွာက အရင်ကထက်တော့ တိုးတက်လာပါတယ်။ အေးချမ်းပါတယ်။ အနီ နဲ့ အဝါ နောက်ဆုံးရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြိုင်ကြတော့ မုံရွာမှာ။ ဖဆပလ နှစ်ခြမ်းကွဲတော့ ၅ တန်း။ တော်လှန်ရေးကောင်စီက အာဏာသိမ်းတော့ ၈ တန်း။ မဆလ ၂၆ နှစ် အစအဆုံးမိတယ်။ ၁၉၈၈ အရေးအခင်းကြီးနေ့ဟာ အစိုးရခန့်ဆရာဝန် လုပ်သက် ၁၅ နှစ်ရဲ့ နောက်ဆုံးနေ့။ နဝတ ကနေ နအဖ မဖြစ်ခင် ပြည်ပရောက်သွားရတယ်။ လွတ်လပ်ရေး ၇၄ နှစ်ပြည့်ချိန် သမင်အိုကြီး မြင်နိုင်သလောက် ကြည့်တယ်။ ရွာကို ကားနဲ့သွားလို့ရပြီ။ တောသူတွေ ဆိုင်ကယ်စီးနေကြတယ်။ မင်းရွာမှာ အရင်မူလတန်းကျောင်းပဲ ဆက်ရှိနေတယ်။ မုံရွာအထက်တန်းကျောင်းကလည်း အဆောက်အဦဟောင်းပဲ ဆက်ရှိနေတယ်။ ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ် ထိန်းထားတာ။ အရင်က ကျောင်းသားတွေ မုံ့ဖိုးက ၅ ပြား ၁၀ ပြားဆိုရတယ်
ပေတရာဆီလျှောက်ပါလို့ မြင်သလောက်ပြလိုက်ချင်ပါသည် ့့့ အင်မတန်ကျေးဇူးတင်ပါသည် အလွန်တရာကျေးဇူးတင်ပါသည် ့့့ တုံးကျော်မ - မာမာအေး https://www.youtube.com/watch?v=qQgIrF4vHWg ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
သံတအယ်အယ် သူရကာယ်၊ အပါယ်လေးဘုံမှာ တလိုင်းသဘွယ် လူသူငယ်၊ နောက်ဖယ်မရိတ်သာ။ ကြေးနီတဆယ် ငွေတဆယ်၊ သည်ဖွယ်သုံးပိဿာ။ အဲကာရန် ၅၉ ပုဒ် လက်တော်ဝင်ဆွဲ၊ တလံခွဲ၊ ပြောင်ပြဲနဖူးဖျား။ တရုပ်ကျဆဲ၊ နန်းတော်လွှဲ။ မင်းရဲကျော်ခေါင်အား။ နှင်းတဖွဲဖွဲ၊ တပို့တွဲ၊ ပေါက်လဲငုံကားကား။ စပါးတခွဲ၊ ငွေတပဲ၊ ခြင်မြဲဆယ်တင်းစား။ အပိုလိုဖြစ်နေတဲ့ (း) တွေကို အခုမထည့်ကြတော့ပါ။ အဲလိုအပြောင်းအလဲမျိုးကာသာ ခေတ်ကာvအရအပြောင်းအလဲမည်တယ်။ ပိုပြီးလွယ်ကူရှင်းလင်းစေတယ်။ ခေတ်သဘောဆိုတာ ပိုရှုတ်ထွေးအောင် ခက်ခဲအောင် မလုပ်ရပါ။ ကဝိလက္ခဏာ သတ်ပုံကျမ်း https://kupdf.net/download/_5a3a2d9be2b6f5045a2c2cad_pdf ၁၂၆၂ (၁၉၀၀) ခုနှစ် ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
အမြင်ကျဉ်းမြောင်း စိတ်ကျဉ်းမြောင်း၍ တွင်းအောင်းရသည့် ဘဝမှ လွတ်ပါစေ။ စိတ်ဓာတ်သေးနုပ် ဉာဏ်သေးနုပ်၍ ချုပ်ချယ်မှု အမျိုးမျိုးမှ လွတ်ပါစေ။ တို့အချင်းချင်း ခေါင်းထက်နင်း၍ သိမ်ဖျင်းလုပ်ဇာတ် စိတ်ယုတ်ပတ်နှင့် ပုတ်ခတ်ကြသည့် ဘဝမှ လွတ်ပါစေ။ သူကမမှန် ငါကမှန်ဟု တယူသန်စွဲ စိတ်သေးဖွဲနှင့် ငရဲဘဝမှလည်း လွတ်ပါစေ။ သူ့ဂုဏ်ကိုချ ကိုယ့်ဂုဏ်ပြကာ မာနစကား တဖွားဖွားနှင့် အမှားကမ္ဘာမှလည်း လွတ်ပါစေ။ မကောင်းမှုခင် ကောင်းမှုကြဉ်သည့် ဥာဉ်ဆိုးဥာဉ်မိုက် မီးပုံမြိုက်၍ ငိုရှိုက်ရခြင်းမှလည်း လွတ်ပါစေ။ နှစ်သစ်မြတ်ဆု ဤကောင်းမှုကြောင့် သာဓု သာဓု သာဓု ခေါ်စေသော်ဝ် ။ ။ (တင်မိုး) သတ်ပုံတွေကို မူရင်းအမှန်အတိုင်းသာ တင်ပြကြစေလိုပါတယ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
Omicrom may fade fast
၃၁-၁၂-၂၀၂၁ အိုမီခရွန် မှေးမှိန်သွားစရာရှိဟု ပညာရှင်များပြောဆို ၁၄-၁၂-၂၀၂၁ Omicron is spreading fast. That's alarming even if it's mild အိုမီခရွန် ရောဂါမဆိုးလှသော်လည်း လျင်မြန်စွာပြန့်ပွားနေ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
3 types of carcinogens carcinogen, any ofanumber of agents that can cause cancer in humans. They can be divided into three major categories: 1. chemical carcinogens (including those from biological sources), 2. physical carcinogens, and 3. oncogenic (cancer-causing) viruses. 1 Radiation2In prepared food3In cigarettes Others Gasoline (contains aromatics) Lead and its compounds Alkylating antineoplastic agents (e.g. mechlorethamine) Styrene Other alkylating agents (e.g. dimethyl sulfate) Ultraviolet radiation from the sun and UV lamps Alcohol (causing head and neck cancers) Other ionizing radiation (X-rays, gamma rays, etc.) Major carcinogens implicated in the four most common cancers worldwide In this section, the carcinogens implicated as the main causative agents of the four most common cancers worldwide are briefly described. These four cancers are lung, breast, colon, and stomach cancers. Together they account for about 41% of worldwide cancer incidence and 42% of can
စောစောက ရှင်၊ ရှင့် လို့ မသုံးတတ်ကြကြောင်း တင်ပြတယ်။ ဒီတခါ ခင်ဗျာ၊ ခင်ဗျား၊ ဗျ၊ ခင်မျာ။ ဆရာခင်မျာ ခင်မျာလို့ ရေးထားတာ တွေ့ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော်တို့ လို့ ရေးရင် မှန်သလား မှားသလား သိချင်ပါတယ်ခင်မျာ။ ဝါကျအဆုံးမှာ ခင်များ လို့ရော (း) ထည့်သုံးပါသလား။ ခင်မျာ ပဲလား အသုံးအနှုန်း ယူဆပုံ နားလည်ချင်ပါတယ် ဆရာ ရှေးကသုံးခဲ့တယ်။ ခင်ဖြား = ခင်ဖရား။ ခင်ဗြား = ခင်ဗရား။ ခင်ဘြား = ခင်ဘုရား။ ဗျား ခင်ဗျား ဗျာ ဗျာပါသောက ဗျာများသည် ဗျာနည်းသည် ဗျာပါဒတရား ကဗျာကရာ ကဗျာလင်္ကာ ကဗျာကသီ ဗျာဒိတ်တော် ဗျာပါဆံ ဇရာဗျာဒိ များ များပြားသည် များများစားစား များစွာသော များဗိုလ်လူ အနည်းအများ များလျားကျ ခေါ်ရင် ဗျာလို့ ထူးတယ်။ ခင်ဗျာလို့ ထူးတယ်။ စကားကိုအလွယ်ပြောရာကနေ ခင်မျာ ခင်မြာလို့လည်း အသံထွက်လာကြတာရှိတယ်။ ဗျာထူးလို့ရှိတယ်။ မောင်မောင်ခေါ်တုန်းက ဗျာမထူးဆိုတဲ့စကားရှိတယ်။ ဆရာ မြသန်းတင့်က လမင်းကို ထရံပေါက်မှကြည့်ခြင်းထဲမှာ သည်လိုရေးထားတယ်။ ခင်ဗျား ခွဲချေထုထောင်းပြီး အရည်ကျိုရမယ့် ကျောက်ခဲတုုံးတွေဟာ စာရေးဆရာရဲ့ စကားလုံးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ခင်ဗျားသုံးရမယ့် ပေါက်တူးတွေ ဂေါ်ပြားတွေဟာ ခင်ဗျားရဲ့ အလေးထားမှု၊ စိတ်အားထက်သန်မှု၊ စိတ်ရ
၇၇၅။ မှန်ပေ၏ “မမြဲသောအခြင်းအရာအားဖြင့် နှလုံးသွင်းသောသူအား သဒ္ဓိန္ဒြေသည်လွန်ကဲ၏။ သဒ္ဓိန္ဒြေလွန်ကဲသောကြောင့် သောတာပတ္တိမဂ်ကို ရ၏။ ထို့ကြောင့် သဒ္ဓါနုဿာရီပုဂ္ဂိုလ်ဟုဆိုအပ်၏” ဟူသော စကားကို၎င်း၊ ထိုမှတပါး “မမြဲသော အခြင်းအရာအားဖြင့် နှလုံးသွင်းသောသူအား သဒ္ဓိန္ဒြေသည်လွန်ကဲ၏။ သဒ္ဓိန္ဒြေလွန်ကဲသောကြောင့် သောတာပတ္တိဖိုလ်ကို မျက်မှောက်ပြု (အပ်)၏၊ ထို့ကြောင့် သဒ္ဓါဝိမုတ္တပုဂ္ဂိုလ်ဟု ဆိုအပ်၏” ဤသို့ အစရှိသော စကားကို၎င်း ဟောတော်မူ (အပ်)၏။ ၇၇၇။ ဆိုခဲ့ပြီးသည်မှ တပါးသောလေးပုဒ်တို့၌ ယုံကြည်မှုသဒ္ဓါသို့ အစဉ်လိုက်၏။ တနည်းကား ယုံကြည်မှုသဒ္ဓါတရားဖြင့် (သစ္စာကိုသိခြင်းအား) လျော်စွာ သွားတတ်၏၊ ထို့ကြောင့် သဒ္ဓါနုသာရီ မည်၏။ ထို့အတူ ပညာဟုဆိုအပ်သော တရားသို့ အစဉ်လိုက်၏။ တနည်းကား ပညာဟူသော တရားဖြင့်လျော်စွာ သွားတတ်၏။ ထို့ကြောင့် ဓမ္မာနုသာရီမည်၏။ အရူပဈာန်နှင့် အရိယာမဂ်ဟူသော နှစ်ပါးသော အဖို့ဖြင့် လွတ်မြောက်၏။ ထို့ကြောင့် ဥဘတောဘာဂဝိမုတ္တ မည်၏။ သိလျက် လွတ်မြောက်၏။ ထို့ကြောင့် ပညာဝိမုတ္တမည်၏ဟု ဤသို့သဒ္ဒါ၏ (ဖြစ်ပေါ်လာကြောင်း) အနက်ကို သိအပ်၏။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ်မြန်မာပြန် (စတုတ္ထတွဲ) မှ ကောက်နုတ်ချက်။ ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစည်ဆရာတော်ဘ
ရွှေပြည်တော် ရောက်နိုးနိုးနဲ့ တမိုးတော့ သောက်ပြန်ပြီ ရှေ့ဆက်လို့ချီ အရှေ့ဆီ ရောင်နီက ပြေးပြေး ပန်းတရုံ လွှမ်းဖုံဆင့် ပန်းပွင့် မွှေးမွှေး။ (တင်မိုး) သတ်ပုံမူရင်းအမှန်အတိုင်း ရေးသားတင်ပြထားသူ ကျေးဇူး။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
အချစ် ကြည့်စမ်း တထစ် လှမ်းစရာ ဒါဟာ အသစ် နှစ်ဆန်းတရက်ကွဲ့။ မနက်ဖန်အတွက် ခရီးထွက်ဖို့ သက္ကရာဇ် အသစ်တိုး တဆစ်ချိုး နှစ်ဆစ်ကွေ့ ဟောဟိုရှေ့မှာ တိမ်လွှာကို ရိုကျိုး မိုးကို နမ်းနေတဲ့ မိုးနမ်းတောင်ကြီး မောင်တို့ခရီးကို ဟန့်ဆီး တင်းမှောင် ပါးပြင်းထောင်လို့နေပေါ့။ လှိုင်းအပုတ်မှာ ဗျိုင်းတအုပ် လန့်ပျံ ကြံ့ကြံ့မခံနိုင် သောင်ယံကို ခွာခွဲ သည်လို ဘာဖြစ်လို့ ကိုယ်ခံအားနည်းရမှာလည်း။ နွေမြေမာကျစ် စေးပျစ်ခြုံအထပ်ထပ် ကျပ်တည်းကုန်းမြေအငူ လေပူပူမှာ ပလွေကြူသံလား မြွေမြူသံလား အသံများကို နားထောင် မိုးနမ်းတောင်ကို မောင်တို့ ကျော်လွှား တနေ့သားတော့ ဖဝါးခြေရာချန် ဘာဖြစ်လို့ အိမ်ပြန်မလှရမှာလည်း။ (မောင်ခိုင်မာ) သတ်ပုံမူရင်းအတိုင်း တင်ပေးထားသူ ကျေးဇူး။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
မြန်မာစါမှာရှေ့က "အ" အသုံးများတာသိချင်ပါတယ်ဆရာ။ အရေးအဖတ်။ အလှအပ။ အနေအထိုင်။ အပြောအဆို။ အတွက်အချက်။ စသည်ဖြင့်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
တမ်းတမျှော်ရ စာဆိုလ ချမ်းငြိမ်းလေစွ၊ တခဏတွင် ပန်းလျကိုယ်စိတ်၊ ချွေးသပ်နာဖြေ နွမ်းမောပြေ၏။ (နုယဉ်) လှိုင်ထိပ်ခေါင်တင်ခေတ်ကတည်း မြန်မာစာကို သတ်ပုံမှန်နဲ့သာ ရေးပါတယ်။ ဆောင်းရှုခင်း ဆောင်းနံနက်ခင်း၊ နေရောင်ဝင်း၍ နှင်းမှောင်ပြိုကွဲ၊ နရဲရဲသည် ဆောင်းပွဲသာစွ၊ သာလေစွ။ ဆရာတင်မိုးက (တစ်)ရဲရဲလို့ မရေးပါ။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
လင်ငယ်နေတက်တဲ့ မိန်းမတယောက်က ဈေးရောင်းရင်း ငိုက်နေတဲ့ မိန်းမတယောက်ကို မြင်တော့ သူလည်း ငါ့လိုပဲ - အခုစာမျက်နှာမှာ သတ်ပုံတွေ မှန်လို့ တချို့စာတွေကို ကူးယူပြီးတင်ပါတယ်။ ဒီစာမှာ (တက်) နဲ့ (တတ်) မှားနေတယ်။ တက်နဲ့ တတ်က အတော်ကို မှားနေကြတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ မသိသေး။ ကျောင်းမှာ အဲလိုသင်နေပြီလား။ သင်ပေးသူကိုယ်တိုင်က မှားနေသလား။ လင်ငယ်နေတတ်တဲ့ လို့ ရေးတယ်။ (ကန်တော့)။ စာတတ်သည် ကျောင်းတက်သည် စျေးတက်သည် စျေးမဝယ်တတ် စာမတတ်လို့ အတန်းမတက်ရ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
၂၀၂၁ အကုန် ၂၀၂၂ အကူးမှာ ဆုတောင်းစာတွေ အရင်နှစ်တွေ၊ အရင်နေ့ထူးနေ့ရက်တွေမှာလို မလာတော့ပါ။ မလာတာ ကောင်းသလိုလို။ ဆုတောင်းစာတွေမှာ မှန်အောင်ရေးတာ အတော်ကိုရှားတယ်။ အမှားကို ကူးယူပြီး ပို့ကြတာက ၈၀% လောက်ရှိတယ်။ ဤပို့စ် မြင်သူ့အပေါင်း သူတော်ကောင်း ကြွေးမြေခသိပ် ကင်းပါစေတဲ့။ မြင်သူအပေါင်းလို့ ရေးရတယ်။ မြင်သူ့ဆိုတာ မြင်သူ၏။ ကြွေးမြေခပ်သိမ်းလို့ ရေးရတယ်။ မြေခဆိုတာ ကြွေကျတာ။ သိပ်ဆိုတာ ကလေးသိပ်တာ။ နေ့ဆင်နေတိုင်း တိုးပါစေ။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလို့ ရေးရတယ်။ နောက်တခုက မေတ္တာစာလေးပါတဲ့။ အသံဖိုင်။ မေတ္တာစာဆိုတာ ရှေးဘုရင်တွေခေတ်ကတည်းကပေါ်တာ။ ပေါ်စမှာ စာဆိုတွေကနေ ဘုရင်ကို ဆက်သွင်းကြတယ်။ မေတ္တာရပ်ခံစာသဘောပါ ရေးကြတယ်။ ရှင်မဟာသီလဝံသ၊ ရှင်မဟာရဋ္ဌဌသာရ၊ ကန်တော်မင်းကျောင်းဆရာတော်၊ ကျည်းကန်ရှင်ကြီး၊ ရှင်ဥက္ကံသမာလာ၊ စလေဦးပုည၊ ကင်းဝန်မင်းကြီး အစရှိသူတွေရေးခဲ့တာတွေက မြန်မာစာပေမှာ သမိုင်းတင်ရစ်တယ်။ နောက်တခါ ချစ်ခင်ကြသူတွေအတွက် ရေးလာကြတယ်။ မေတ္တာစာလို့ ခေါ်တယ်။ အဆန်းတခုက အသံဖိုင်ပို့ပြီး နားဆင်ကြည့်ပါတဲ့။ ကျွန်တော်က အသံဖိုင်တွေ ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကို မဖွင့်ပါ။ နေမကောင်းလို့ မေးတာလားတော့ မသိ။ ဂူဂယ်လမ်းမကြီးပေါ်ကကောက်ယူလာတဲ့ပု
၂၀၁၈ အကုန်မှာရတဲ့စာ။ ၂၀၁၉ မှာလည်း မတောင်းမတ မကြောင်းမကျ ဘဲ လိုအင်ဆန္ဒတွေအားလုံး ပြည့်စုံသော် နှစ်ဖြစ်ပါစေ ဆရာ လက်နဲ့ရေး ဆုတောင်းတာမျိုးတော့ ကျေးဇူးတင်တယ်။ သတ်ပုံလည်းပြင်မယ်။ မကြောင့်ကြလို့ ရေးရတယ်။ ထို့ကြောင့် သို့ဖြစ်သောကြောင့် ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်သည် ကြောင့်ကြစိုးရိမ် ကြောင့်ကြပူပန် သူ့ကြောင့် ငါ့ကြောင့် ကြောင့်ကြမှုကင်းပါစေ ထို့ကြောင့် ဤသို့ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၃၁-၁၂-၂၀၁၈
Swe Generation ဆွေမျိုးဆက်
ကလေးတွေပုံတင်တဲ့အခါ မသိသေးသူတွေက မေးကြတယ်။ ကလေးဘယ်နှစ်ယောက်လဲ၊ နာမည်လေးတွေ စသဖြင့်။ ဖြေတဲ့သူက လက်ချိုးရေတွက်ရတယ်။ အက္ခရာသချင်္ာလိုရေး ဖြေရမယ်။ ၃ (၅ -၂) သားသမီး ၅ယောက်မွေး (၃ ယောက်ကျန်)၊ မြေး ၈ ယောက်၊ မြစ် ၁ ယောက်။ ပဌမမျိုးဆက် = ဝဏ္ဏတင့်ဆွေ၊ ချမ်းမြတင့်ဆွေ (ကိုချမ်း)၊ နန္ဒတင့်ဆွေ (ကိုပေါက်)၊ နေမြမြဆွေ (နေနေ)၊ ရာဇာတင့်ဆွေ။ ဒုတိယမျိုးဆက် = သဒ္ဓါဆွေ ခေါ် ကေးကေး (ကိုဝဏ္ဏသမီး)၊ ပင်နီဆွေ (ကိုချမ်းသား)၊ တာရာဆွေ (ကိုပေါက်သမီး)၊ ဧကရီဆွေ (ကိုရာဇာသမီး)၊ ဝိဇ္ဇာဆွေ (ကိုရာဇာသား)၊ ပညာဆွေ (ကိုပေါက်သား)၊ ရွှေရည်မြမြဆွေ (ကိုရာဇာသမီး)၊ နွေဦးဆွေ (ကိုပေါက်သမီး)။ တတိယမျိုးဆက် = အမရာဆွေ (သဒ္ဓါဆွေ ခေါ် ကေးကေး သမီး)။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၂၈-၁၂-၂၀၂၁
အမေရိကန် မရိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင် ၂၀၆ ယောက်ကို ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးမထိုလို့ အလုပ်က ထုတ်လိုက် https://www.foxnews.com/politics/more-than-200-marines-have-been-discharged-from-military-vaccine-refusal ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
တခါတုန်းက ကျီးကန်းတကောင် ရှိတယ်။ သူဟာ သူ့ကိုယ်သူ လောကမှာ ငါဟာ အပျော်ဆုံး ငှက်တကောင်ပဲ ဆိုပြီး ဘဝကို သာယာနေတယ်။ တနေ့မှာတော့ ကျီးကန်းဟာ ဗျိုင်းတကောင်ကို တွေ့တယ်။ သူ့တကိုယ်လုံးက ဖြူဖွေးနေတာပဲ။ ငါကတော့ မည်းနက်နေတယ်။ သူဟာ လောကမှာ အပျော်ဆုံးငှက် ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ တွေးမိတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဗျိုင်းကို သူ သွားပြောတယ်။ "ကိုဗျိုင်းရာ၊ ခင်ဗျားအရောင်က ဖြူဖွေးနေတာဘဲ လှလိုက်တာ။ ဧကန္တ ခင်ဗျားဟာ လောကမှာ အပျော်ဆုံးငှက် မဟုတ်လား" ဒီတော့ ဗျိုင်းက ပြန်ပြောတယ်။ "ကျွန်တော်လည်း အစက ဒီလိုတွေးမိတာ ကြက်တူရွေးကို မတွေ့ခင် အထိပါ။ ကျွန်တော်က အဖြူရောင်တခုတည်း ရှိတာ သူ့မှာက အရောင်နှစ်မျိုး ရှိတယ် သိပ်လှတယ်ဗျ" ဒီလိုနဲ့ ကျီးကန်းလည်း ကြက်တူရွေးဆီ သွားတယ်။ "ခင်ဗျားက အရောင်း ၂ မျိုးနဲ့ သိပ်လှတယ်ဗျာ။ ခင်ဗျားက ကမ္ဘာပေါ်မှာ အပျော်ဆုံးငှက်ပဲမဟုတ်လား" ကြက်တူရွေးက "ဟား၊ ကျွန်တော်က ဘာဟုတ်သေးလဲဗျာ။ ကျွန်တော့်မှာ အရောင် ၂ မျိုးပဲ ရှိတာ။ ဒေါင်းမှာ အရောင်တွေ အများကြီးနဲ့ဗျ။ ခင်ဗျား သူ့ကို သွားမေးပါလား" လို့ ဖြေလိုက်တယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကျီးကန်းလည်း ဒေါင်းကို လိုက်ရှာရင်း တိရစ္ဆာန်ရုံ တခုထဲမှာ လူတွေ အများကြီ
လိပ်ခဲတင်းလင်း ခေါင်းစဉ်ကိုတွေ့တယ်။ မူကွဲသတ်ပုံ ၃ ခုတွေပါတယ်။ အရင်ကတည်းက ရေးကြတာတွေ။ လိပ်ခဲတင်းလင်း၊ လိပ်ခဲတည်းလည်း၊ လိပ်ခဲတဉ်းလည်း၊ စက္ကူလိပ် ဖျာလိပ် ဗိုင်းလိပ်တံ လိပ်ကျည်(သတ္တဝါ) လိပ်ကျည်ပင် လိပ်ခုံးမိုး လိပ်ဆူးရွှေပင် လိပ်တုံး (ရက်ကန်း) လိပ်ပတ်လည်အောင်ပြောပါ လိပ်ပြာ လိပ်ပြာစဉ် လိပ်သည်းကျောက် လိပ်သတ္တဝါ လိပ်ဥ လိပ်ကျောက်မြီး သည်းခြေသလိပ် ဆေးလိပ် နေရပ်လိပ်စာ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
မှီ နဲ့ မီ စမ်း နဲ့ ဆမ်း
Happy new year အမှီ (အမီ) ချက်စားဖို့ အရမ်းစားကောင်းတဲ့ ကြက်သောက်စမ်း (ဆမ်း) ရှယ်ချက်နည်းလေး အမီလို့ ရေးရ။ စမ်း နဲ့ ဆမ်း မတူပါ။ (ပုံက တခြားကဖြစ်ပါတယ်။) စုံစမ်း စမ်းစလုတ် (ချောင်း) စမ်းတဝါးဝါး စမ်းတိစမ်းတမ်း စမ်းသပ် စမ်းချောင်း စားစမ်း စိမ့်စမ်းရေယဉ် စူးစမ်းဆင်ခြင် ဆီဆမ်း ပျားရည်ဆမ်းခရီး လက်နှင့်စမ်း လာစမ်း သွားစမ်း ဟင်းရည်ဆမ်း ခါတော်မီ တိုင်ကိုမှီနေသည် ကြီးရင်မှီ ငယ်ရင်ချီ မတိုင်မီ မကြာမီလာမည် မလာမီ (မလာခင်) မှီကပ်နေသည် မှီခိုသူ မှီတင်းနေထိုင်ကြသည် မှီငြမ်းပြုသည် မှီဝဲပါ မှီအုံး မသွားမီ မီအောင်ဆိုပါ မီအောင်လိုက်ပါ မပြောမီ လှတာလိုက်လို့မမီဘူး အချိန်မီ အချိန်မစေ့မီ (အချိန်မတိုင်ခင်) ဘယ်ပန်းချီရေးလို့မမီ (ဇော်ဝမ်း) https://www.youtube.com/watch?v=SnbTOvfewq0 https://www.youtube.com/watch?v=civ6FCBUCHE တေးရေး သောတမောင်၊ အဆို မေလှမြိုင်သီချင်း ဆောင်းအမီကို ဆောင်းအမှီလို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ထားတဲ့ ပြန်ဆိုသီချင်းမှာ သီချင်းစားသာတွေကလည်း အတော်မှားနေတယ်။ ပုံပါလင့်တခုသာ မှန်တယ်။ https://www.youtube.com/watch?v=voD_I-Wn3Kw မြန်မာသတ်ပုံရယ် ဆောင်းအမီရောက်အောင် ပြန်ခဲ့စေချင်တယ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
လေယာဉ်ပေါ်မှာ ကိုဗစ်ကြောင့် အိုင်ဆိုလေးရှင်းလုပ်ရခြင်း ယူအက်စ်အေ ချီကာဂိုကနေ အိုက်စလန်နိုင်ငံ ရေကယာဗစ်ကိုသွားမဲ့ အမျိုးသမီးခရီးသည် Marisa Fotieo ဟာ လေထဲမှာ ကိုဗစ် (+) ဖြစ်တာသိရလို့ တယောက်တည်း တွိုင်းလက်ခန်းလေးထဲမှာ အိုင်ဆိုလေးရှင်း လုပ်ရပါသတဲ့။ ၁၉-၁၂-၂၀၂၁ နေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆွစ်ဇာလန်ကို သူ့အကိုနဲ့ အဖေတို့နဲ့အတူ ခရီးသွားကြတာ။ ခရီးမထွက်ခင် PCR tests ၂ ခါနဲ့ rapid tests ၅ ခါလုပ်ခဲ့သေးတယ်။ (-) ပိုးကူးစက်ခံရခြင်း မတွေ့ပါ။ ဒါပေမဲ့ လေထဲမှာ တနာရီခွဲလောက်ကြာတော့ လည်ချောင်းနာလာတယ်။ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးလည်း ၂ ခါ အပြင် ကျောင်းဆရာမလည်းဖြစ်တော့ ဘူစတာဒို့စ်ပါထိုးထားပြီးသား။ လေယာဉ် ဘာ့သ်ရုမ်းထဲသွားပြီး ကိုဗစ် ထပ်စစ်ကြည့်တော့ (+) တဲ့။ တယောက်တည်း အိုင်ဆိုလေးရှင်းလုပ်တယ်။ ဘာ့သ်ရုမ်းထဲမှာ ၃ နာရီ။ အဲဒီအခန်းကျဉ်းလေးထဲမှာနေရင်း စားစရာတွေစား၊ အရည်တွေလည်းသောက်တယ်။ အင်တာနက်ရအောင်ဝယ်လိုက်ပြီး တချိန်လုံး TikTok video သုံးတယ်။ အဲဒီဗီဒီယိုကို အင်္ဂါညနေ့အထိ ကြည့်သူပေါင်း 4.3 million ကျော်သတဲ့။ အိုက်စလန်မှာ လေယာဉ်ဆိုက်တော့ သူ့မိသားစုက နောက်ဆုံးမှ ဆင်းကြရတယ်။ စမ်းမတွေ့တဲ့ အဖေနဲ့ အကိိုတို့က ဆွစ်ဇာလန်ကို ဆက်သွားနိုင်ကြတယ်။ သူ့
အောင်စေသတည်း ၁။ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃ဝ၉ ခုနှစ်ပြာသိုလဆုတ် ၉ ရက် (အင်္ဂလိပ်သက္ကရာဇ်၁၉၄၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်) တနင်္ဂနွေနေ့ ကောင်းမြတ်သန့်စင် မင်္ဂလာအပေါင်းနှင့် ပြည့်စုံသောအခါ၌ ဤငါတို့ မြန်မာပြည်သည် လုံးဝလွတ်လပ်သော အချုပ်အချာ အာဏာပိုင် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးအဖြစ်သို့ ရောက်ပြီ။ ၂။ ဤငါတို့ မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးသည် လိုရာမတ ပြည့်စုံလှ၍ ဘူမိနက်သန်မှန်သော မြေထူးမြေမြတ်လည်းဖြစ်၏။ မွန်မြတ်သန့်စင်သော တရားထူးတရားမြတ်တို့တည်ရာ မြေကောင်းမြေမွန်လည်း မှန်၏။ မြေတွင်းမြေပြင်အထူးထူးသော ရတနာအပေါင်းတို့နှင့် ပြည့်စုံသဖြင့် သတ္တဝါအပေါင်းတို့ ဆွတ်ယူစားသုံး ကမ္ဘာဆုံးသော်လည်း မသုဉ်းမကုန်နိုင်သော ပဒေသာစစ် အနှစ်သာရ ကြွယ်ဝပြည့်စုံသောမြေလည်းဖြစ်၏။ ဘူမိနက်သန် မှန်လှထူးချွန် ဤမြေမွန်မြေမြတ်၌ ရှမ်း၊ ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ မြန်မာ စသည်ဖြင့် တသွေးတသား တမိဘ ဖြစ်ကြကုန်သော ငါတို့သည်နှစ်ပေါင်းထောင်ရာ သချင်္ာပွားတက် ရေတွက်ခြင်းငှာ မတတ်နိုင်ရာသော ရာဇဝင်ရှည်ဝေး ရှေးပဝေသဏီမှစ၍ တညီတညွတ် တစုတရုံး လွတ်လပ်သော လူမျိုးအဖြစ် တည်ခဲ့ကြ၏။ တကောင်း၊ သရေခေတ္တရာ၊ ပုဂံ၊ မြင်စိုင်း၊ စစ်ကိုင်း၊ ပင်းယ၊ အင်းဝ၊ ကုန်းဘောင် ထို့နောက
တစ် သို့မဟုတ် တ
ကလေးတွေအတွက် မြန်မာစာသင်ရိုးရှာရင်း တွေ့တာဆရာ။ တစ် or တ တဆယ် တရာ တထောင် တသိန်း ပဌမ ကျေးဇူး။ ကျွန်တော်တို့က အဲလို မှန်မှန်ကန်စာတွေ သင်ခဲ့ရတာ။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
လွတ်လပ်ရေးက ဟောင်းပြီလို့ ပြောချင်ကြသလား
ျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။ အခု သမီးလေး ၆နှစ်အရွယ် အွန်လိုင်းကျောင်းတခုကနေ မြန်မာစာသင်တာ "တစ်ခု တစ်ကြိမ် တစ်ခါ" ဆိုပြီးသင်နေတာ သူတိုကျောင်းကို စာပိုပြီး "တခု တကြိမ် တခါ" ဆိုပြီးစိစစ်သင်ကြားပေးဖိုတောင်းဆိုတာ ကျောင်းအုပ်ကိုယ်တိုင်က "တစ်ခု တစ်ကြိမ် တစ်ခါ" က ခတ်သစ်ရေးနည်းဆိုပြီးပြောလာလိုပါ။ ဘယ်လိုများ သက်သေပြပြီးပြန်ပြောလိုရနိုင်မလဲခင်ဗျ။ သြကာသ၊ သြကာသ၊ သြကာသ၊ ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မနောကံတည်းဟူသော ကံသုံးပါးတို့ဖြင့် ပြစ်မှားမိသည်ရှိသော် ပျောက်ပစေခြင်း အကျိုးငှာ၊ တကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်၊ သုံးကြိမ်မြောက်အောင်၊ ဘုရားရတနာ၊ တရားရတနာ၊ သံဃာရတနာ၊ တည်းဟူသော ရတနာမြတ်သုံးပါးတို့အား ရိုသေမြတ်နိုး၊ လက်အုပ်မိုး၍ ရှိခိုးပူဇော် ဖူးမြော်မာန်လျော့ ကန်တော့ပါ၏ အရှင်ဘုရား။ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အတွဲ (၁၅)၊ စာမျက်နှာ (၉၅) မြန်မာစာ မူရင်းအမှန်က တခါ ကို တခါ လို့သာရေးပါတယ်။ အကိုးအကားတွေ ထောင်ဂဏန်းရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျောင်းတွေ၊ ရုံးတွေ၊ ဘဏ်တွေမှာ၊ အထက်က ပယ်ချလိမ့်မယ်။ ပြင်အရေးခိုင်းမယ်။ ပိုက်ဆံထုတ်မရဖြစ်မယ်။ (တစ်) နဲ့ရေးရင်တော့ (တစ်) သက်တာစာပေဆု ရပါမယ်။ ကြိုးစားကြရပါမယ်။ မှားအောင်လုပ်လို့ရခဲ့ရင်၊ မှန်အောင်လုပ်တ
တဦးဆောင်သော် မရ။ တသောင်းဆောင်သော်ရ၏။ ခုခေတ်မှာ တဦး မရှိ။ တသောင်း မရှိ။ နဝတ ခေတ်ကတည်းက စုပေါင်းဖျက်တော့ မြန်မာစာပျက်၏။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
Covid ကိုဗစ် မေးခွန်း
Sinopharm သိုမဟုတ် Covid Shield2ကြိမ်ထိုးထားပြီးဆို စိတ်ချရတဲ့ အခြေနေရှိလားဆရာ covishield vaccine လို့ ရေးရတယ်။ မကြာခဏ ဖြေရတယ်။ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါက အသစ်စက်စက်ဖြစ်တယ်။ ဆရာဝန်တွေ နေ့ရောညပါ လေ့လာသုတေသနလုပ်နေကြတယ်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အကုန်က ဖြစ်စထက် အများကြီး သိလာပြီ။ ကာကွယ်နည်း သိလာပြီ။ ကုသနည်းလည်း အတိုင်းအတာ တခုထိ သိလာပြီ။ ကာကွယ်ဆေးတွေ ပေါ်လာပြီ။ ကမ္ဘာပေါ်ကနေ ကျောက်ကြီးရောဂါလို ပျောက်သွားအောင် မလုပ်နိုင်သေးပါ။ လုပ်နိုင်မယ်လည်း မထင်ပါ။ အနီးစပ်ဆုံးဥပမာက တုပ်ကွေး။ တုပ်ကွေးကလည်း ဗိုင်းရပ်စ်တမျိုးကနေဖြစ်တယ်။ ကိုဗစ်ကလည်း ဗိုင်းရပ်စ်တမျိုး။ တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးကို တနှစ်တခါ ဆေးသစ်ထုတ်ပြီး လူတိုင်း ဘယ်တိုင်းပြည်မှာနေနေ တနှစ်တခါ ထိုးကြရတယ်။ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးအမျိုးမျိုးမှာ ဆေးသုတေသနနဲ့ လေ့လာမှုအတိအကျလုပ်တာ ယူအက်စ်အေက ဆေးတွေ ဖြစ်တယ်။ အဲဒါလည်း ကိုဗစ်ကို အပြီးတိုင် ကာကွယ်မှု မပေးနိုင်ပါ။ ယူအက်စ်အေမှာ အသက် ၅ နှစ်အထက် ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ၃ ကြိမ်ထိုးနေရတယ်။ အဲဒါလည်း ခရစ်စမတ်မှာရော နှစ်သစ်ကူးမှာပါ ကန့်သတ်ချက်တွေ အများကြီးထားရသေးတယ်။ လေယာဉ်တွေ မထွက်ရ။ ကျောင်းတွေတောင် အွန်လိုင်းစနစ် ပြန်ဖြစ်မဖြစ် ပြောမရ။ အစ်ဇရေးလ်မှာ ကာကွယ်ဆေ
ခေတ်သစ် ခြေလှမ်းတွေ၊ နိုင်ငံအလိုက် စွမ်းဆောင်နေတဲ့ ဂြိုလ်နယ်ချဲ့ အခြေချနိုင်ရင် ကြိုးပမ်းမှုတွေ၊ လာမဲ့နှစ်တွေမှာ ပြောင်းလဲနိုင်ဖွယ်ရှိတဲ့ အင်တာနက် အသုံးပြု မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေ အကြောင်း သုံးသပ်မိသလောက် အချိန်အခါသင့်ချိန် မျှဝေပေးပါလို တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ စာလုံး သတ်ပုံ မှားယွင်းမှုများရှိခဲ့ရင် ကျွန်တော့် အားနည်းချက်ပါ။ပြင်ဆင်ပါ့မယ်။ ဂြိုဟ် လို့ရေးရ။ အာကာသသိပ္ပံပညာမှာ စကြဝဠာ ခေါ် ယူနီဗာ့စ်ရဲ့ အစကို လေ့လာနေပြီ။ ဂြိုဟ်က ၈ လုံးတည်းသာရှိတယ်။ အင်္ဂါဂြိုဟ်ကို ကိုလိုနီပြုသလိုဖြစ်လာတာ မှန်တယ်။ ၂၅-၁၂-၂၀၂၁ နေ့သတင်းအရ James Webb Space Telescope ခေါ် အခုထိ အကြီးဆုံး တယ်လီစကုပ် ခေါ် ရွှေနဲ့လုပ်ထားတဲ့ အာကာသအဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းကြီးကို NASA ကလွှတ်တင်လိုက်တယ်။ first galaxies ခေါ်ပဌမဆုံး ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ ဂယ်လက်ဆီတွေကို လေ့လာမယ်။ ဥရောပ European Space Agency နဲ့ ကနေဒါ Canadian Space Agency တို့နဲ့အတူလက်တွဲဆောင်ရွက်ကြတာဖြစ်တယ်။ သိပ္ပံပညာနယ်တွေက အများကြီး။ အကျယ်ကြီး။ ခုခေတ်မှာ သုတနဲ့ သတင်းအတွက်သိလိုသူတွေ ရှာရတာ အလွန်ကိုလွယ်လာတယ်။ ဝဘ်ဆိုက်ကိုသာဖတ်ပါ။ ခိုင်မာ မှန်ကန်တာတော့ ရှာတတ်ရမယ်။ ကျွန်တော်သိတာက သေးသေးမွှားမွ
ယူအက်စ်မှာ ကလေးတွေ အိုမီခရွန်ကြောင့် ဆေးရုံတင်ကုသပေးနေရ အသက် ၁၈ နှစ်အောက်ကလေးတွေကို အရင်ကထက်ပိုပြီး ဆေးရုံတင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေးမထိုးသူတွေမှာ ပိုစိုးရိမ်ရတယ်။ ကလေးတွေမှာ ကူးစက်ခံရရင် ဖျားတယ်၊ အသက်ရှူရခက်တယ်၊ ရေဓါတ်ခန်းခြောက်တယ်။ ဆေးရုံမှာ အသက်ရှူအထောက်အကူ ပေးရတယ်။ အောက်စီဂျင်ပေးရတယ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၃၀-၁၂-၂၀၂၁
မမ ဖယောင်းပန်းပွင့် တပွင့် မြန်မာစာသတ်ပုံကို မှန်အောင်ရေးတဲ့ခေတ်က ခုခေတ်မှာ မမတွေရော ညမတွေပါ တပွင့်မဟုတ်ကြတော့ပါ။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
Community Standards on spam
တဆုပ်ကို မှန်အောင်ရေးတတ်သူ ရှားတယ်
မှန်တာတွေကို လိုက်ရှာတော့ တွေ့ပါတယ်။ ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်း • ကြည်မြန်မာမှ မရမ်းကုန်း (၂)ရပ်ကွက်၊ ရွှေတဆုပ်လမ်းတွင် ၃လွှာတိုက်ခန်း • တစေ့ တဆုပ် တမှုတ် တခွက် • တဆုပ်ဆန်အကြောင်း • ဗမာရွှေတဆုပ်ကြက် • ရွှေတဆုပ် ကနုတ်ဆင်ကာလာ - မြန်မာဖက်ရှင် • လက်တဆုပ်ရှမ်းပြောင်း • သမိုင်းမြို့သစ်၊ ရွှေတဆုပ်လမ်းမှ • သီချင်းတပုဒ်ပန်းတဆုပ် (ခိုင်ထူး) • ဦးနေဝင်း၏ပြာတဆုပ် (ကြေးမုံဦးသောင်း) ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
၁။ ပဲလေးတွေ့လို့ ဝယ်လာတယ်။ ရွာက ကတ္တီပါပဲ နဲ့ တူမလားပဲ။ ကျနော်က အညာသားမဟုတ်ပေမယ့် ပဲကြိုက်ပါတယ်။ စားတော်ပဲ၊ ကတ္တီပါပဲ၊ ကုလားပဲ၊ပဲနီလေး စသည်ပေါ့။ ရွာထဲမှာ ပဲပြုပ်သည် နှစ်ယောက်ရှိတယ်။ တစ်ယောက်က မနက်အစော စားတော်ပဲပြုပ်တမျိုးပဲရောင်းတယ်။ နောက်တစ်ဦးက မနက်ကို စားတော်ပဲပြုပ်ရောင်းပြီး ညနေကို ပဲကတ္တီပါပြုပ်ရောင်းတယ်။ တမျိုးပဲ ကတော့ မှန်။ ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်း။ တစ်ယောက်၊ နောက်တစ်ဦးတွေကတော့ အပြုတ်လွန်သွားတယ်။ ပဲပြုတ်လို့ ရေးရ။ ပြုပ်က ဖားပြုပ်ကောင်၊ ဘာပြုပ်ကောင်။ ၂။ ပဲစင်းငုံလို့ ရေးတယ်မို့လားဆရာ တောင်သူလုပ်စဉ်က အဓိကထားစိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ဟင်းစားပဲမှာ တန်ဘိုးထားမခံရဘူး၊ မြန်မာပြည်မှာပါဆရာ။ အဆစ်အမြစ် ကိုက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ ကောင်းတယ် ဆိုကြတယ်ဆရာ။ တိုင်းရင်းဆေးနည်းတွေ မသိပါ။ ဒေါ်မြမြအေးကတော့ သူငယ်ငယ်က အမျိုးသမီးတွေကို အဲဒီပဲ စားခိုင်းတာ သိတယ်တဲ့။ အရင်သတ်ပုံစာအုပ်တွေမှာ ပဲစင်းခုန်လို့ ရေးတယ်။ ခုခေတ်ထုတ် သတ်ပုံစာအုပ်တွေမှာ ပဲစင်းငုံလို့ရေးတယ်။ အရင်ထုတ်သတ်ပုံစာအုပ်မှ စားတော်ပဲ တပဲ = လေးရွေး ပဲကတိုး ပဲကျား ပဲခွပ် ပဲခူးစာငှက် ပဲချဉ်ပေါင် ပဲစင်းခုန် ပဲစိမ်းစားဥ ပဲစုန်းကြူး ပဲတလက် ပဲတီချဉ် ပဲတီစိမ်း ပဲနံ့သာ ပဲပိစ
အိန္ဒိယမှာ မီထိ လို့ခေါ်တယ်။ ကောင်းတယ်။ အနံ့လေးက တမျိုး။ အရွက်နဲ့ အစေ့တွေက ဆေးဘက်ဝင်သတဲ့။ ပါရှား (အာရတ်) ဒေသမှာလည်း သုံးတယ်။ ယူအက်စ်အေမှာလည်း ရတတ်တယ်။ Methi Leaves (Fenugreek Leaves/Shanbalileh),aPersian and Indian Herb ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ပျိုမေတသင်း လယ်ထဲဆင်းမည် ဒေါက်တာတင့်ဆွေ